Zute ndị na-ekwu okwu nke Converge II Blockchain Meetup
Converge II nke Pan-African Blockchain na Crypto Meetup nke Blockbuild.africa ga-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Wenezde, Nọvemba 24, 2021. Ị nwere ike ịdebanye aha. Ebe a isonye.
Ihe omume mebere nke nwere isiokwu, "Mmetụta akụ na ụba e-naira na ego crypto na akụnụba Nigeria", bu n'obi ikwurịta ohere na okwu nke e-naira site n'aka gọọmentị Naijiria yana kwa otu esi etinye ego sitere na azụmahịa crypto na akụ na ụba.
N'ikpeazụ, The Converge II ga-enyocha otú anyị nwere ike isi kwalite mmekorita n'etiti ihe ndị e kere eke blockchain na gọọmenti Naijiria iji chọpụta ngwọta blockchain, na atumatu ndị na-erite uru na akụkụ abụọ ahụ.
Converge II ga-ahụ ndị na-ekwu okwu bụ ndị ga-ewepụta isi okwu ma kparịta ụka na nnọkọ panel
Cyberchain na-akwado Grand Finale nke Cyberthon na Nov 20
Zute ndị ọkà okwu maka Cyberchain 2021
Converge II: Pan-African Blockchain & Crypto Meetup na-eme na Nọvemba 24, 2021
Ngwunye nke mbụ ga-eme ihe ziri ezi maka isiokwu ahụ, "Mmetụta akụ na ụba nke cryptocurrencies na mba ndị ka na-emepe emepe dị ka Nigeria", ka nnọkọ panel nke abụọ ga-atụle isiokwu ahụ. "E-naira nwere ike imetụta akụ na ụba Naijiria?".
Nke a bụ ahịrị ndị ọkà okwu maka mmemme Converge II:
Chuta bụ onye guzobere na onye nhazi nke Blockchain Nigeria User Group. Ọ bụkwa onye ndu nhazi obodo Drupal Nigeria User Group.
Ọ bụ onye edemede nke "Seizing Opportunities in Blockchain and Digital Currency Revolution: A Handbook for Enthusiasts.", ebe ọzọ nke akwụkwọ ya, "The Building Blocks of Blockchain StartUP Entrepreneurs" na-arụ ọrụ na-aga n'ihu.
Chuta bu onye ama ama ama ama ma obodo Nigeria ma zuru oke na obodo blockchain. Ọ bụrụla onye nkwado na-anabata ihe na onye nkwusa ozioma ruo afọ 9.
Lavina nwere ngwakọta agwakọta na ọtụtụ teknụzụ. Ọ banyere n'ime ọgụgụ isi, Robotics, tinye n'ọrụ Blockchain ka o kwuo ole na ole.
Nkwado ya maka itinye ya n'ọrụ mgbochi mere ka ọ bụrụ onye isi nwanyị na teknụzụ. O bukwa na onye nochiri anya ndi Africa Fintech Network AFN.
Lavina bụ onye na-ede akwụkwọ 'Onye kwere na ụmụ mmadụ na blockchain ịbụ teknụzụ na cryptos bụ ihe izizi izizi nke ike ya
Kosemani bụ onye guzobere Botmecash, cryptocurrency na ikpo okwu mgbanwe ego dijitalụ nke na-enye ndị ọrụ ohere ịmepụta ma nwee adreesị obere akpa nke enwere ike inye ego ịzụta na ire Bitcoin, Altcoin ndị ọzọ, zụọ kaadị onyinye gị na oge ikuku buru ibu maka ego.
Ọ na-emekwa okpukpu abụọ dị ka Co-guzobere Convrs'ah na Onye Mmekọ Ntọala nke TCMN.
Muthoni nwere mmasị na ihe niile metụtara iwu na teknụzụ blockchain.
Ọ bụ onye mmekọ njikwa ahụmahụ nwere akụkọ ihe mere eme nke ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ ọrụ iwu. Ọkachamara na mkparịta ụka, ọrụ ndị ahịa, atụmatụ atụmatụ, atụmatụ ahịa, na nyocha gbasara iwu.
Muthoni ugbu a bụ onye njikwa njikwa na Njogu & Associates Advocate.
Henry bụ Injinia Smart Contract Injinia nwere mmasị ịmụ ihe ọhụrụ ka ọ na-achọ ọrụ siri ike iji mata onwe ya.
Ọ bụ onye na-arụkọ ọrụ nke InfluenXial Community Engagement Firm, ikpo okwu kwadoro iji dozie ọdịiche dị n'etiti azụmahịa crypto na obodo na-eto eto. Henry bụkwa onye nrụpụta Blockchain na REFORLIFE.
Ugbu a ọ bụ Co-nchoputa na CTO nke Lead Wallet Lead, ikpo okwu nwere multi-functional multi-cryptocurrency wallet nke na-enye ndị ọrụ ohere iziga, nata, na gbanwee n'etiti akụ na-enweghị mkpa ịkwaga site n'otu ikpo okwu gaa na nke ọzọ iji nweta ihe pụrụ iche. azụmahịa.
Charles bụ Techpreneur na Blockchain Solutions Architect nwere ihe ọmụma miri emi na tokenization / token aku na uba na Cryptocurrencies, Smart Contracts development on Public and Enterprise blockchains, na Full Stack teknụzụ nwere ihe karịrị 15years nke nkà na ụzụ na mmalite ahụmahụ na ngwa mmepe, oru ngo management, ERP, Cloud. , yana ngwọta uto azụmahịa.
Charles bụ onye otu International Token Standardization Association (ITSA). Onye nkuzi nkuzi Blockchain na tokenization maka Central Bank of Nigeria Payment System Department, Nigeria Security Minting and Printing PLC, Mauritius Institute of Engineering and Technology, na Nigeria Computer Society. Ọzọkwa, onye ọbịa mgbe niile na AriseTV Global Business na teknụzụ Blockchain, CBDC, na tokenization.
Ọ na-anụ ọkụ n'obi ịhụ echiche ndị mebere 'ihe akaebe nke echiche' na atụmatụ bara uru na-abịa na ndụ. Onye ebum n’obi na-achị nke nwere oke agụụ maka nrụpụta na mmepe mmadụ, na-atọ ụtọ, na-achụmnta ego.
Charles bụ onye ndu teknụzụ teknụzụ na Convexity Humanitarian Aid Transfer Solutions (CHATS); a digital cash & Voucher Assistance transfer platform based on Blockchain to make digital token value (Funds) nyefe n'etiti ndị nyere onyinye, ndị NGO, ndị na-erite uru na ndị na-ere ahịa.
Sam bụ onye nrụpụta Software/Blockchain nwere ahụmịhe na-emepe ngwa webụ nwere ụkpụrụ dị elu yana iso ọtụtụ ndị na-etinye aka na teknụzụ na teknụzụ na-abụghị teknụzụ na-emekọrịta ihe, na-eme ka o doo anya, ịdị mma na nnyefe na-aga n'ihu.
Sam bụ onye na-amalite onwe ya nke nwere ikike egosipụtara iji tinye ọtụtụ teknụzụ iji wuo ngwa mmekọrịta na ihe ọhụrụ.
Register Ebe a isonye.
Echefula akụkọ ndị dị mkpa n'ime izu. Debanye aha na blockbuild digest kwa izu maka mmelite.